MYANMAR, I COME FROM MYANMAR | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » MYANMAR, I COME FROM MYANMAR
MYANMAR, I COME FROM MYANMAR
Posted by Green Rose on Dec 15, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 18 comments
“Myanmar, I come from Myanmar..” အဲဒီ့လိုဖြေလိုက်ရတဲ့အချိန် Green Rose ရဲ့ရင်ထဲမှာ ဘာကိုဂုဏ်ယူမိမှန်းမသိ ဂုဏ်ယူနေမိတာ.. ဘာကိုကျေနပ်နေမှန်းမသိ.. ကျေနပ့်နေမိတာ..
Green Rose အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားရဖို့အကြောင်းလေးတစ်ခုရှိလာတယ်။ အမေ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် Medical Check up လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က အကြံပေးလာတော့ အမေက Bangkok ကဆေးရုံတစ်ခုမှာ သွားလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ Green Rose လည်းအလုပ်ကခွင့်ယူဖို့ကိစ္စ Passport ကိစ္စတွေ လုံးပမ်းရပါတော့တယ်။ တဖက်ကလည်း အဲဒီ့ကို ရောက်ဖူးတဲ့ သူတွေဆီကနေ သိသင့်သိထိုက်တာတွေ မေးရ မြန်းရ စုံစမ်းရပါတော့တယ်။ Green Rose ရော အမေရော တစ်ခေါက်မှမရောက်ဖူး တဲ့အပြင် ဟိုမှာကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာတွေကို အချိန်ပေးပြီး လိုက်ပို့ရလောက်အောင် ရင်းနှီးတဲ့ အသိမိတ်ဆွေ မရှိတာပါ။ နောက်တစ်ခုက သွားမယ့်အချိန်အတွင်းမှာ ရောက်သင့် ရောက်ထိုက်၊ သွားသင့်သွားထိုက် တဲ့နေရာတွေကို အစုံအစေ့ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီမှာကတည်းက ကြိုတင်ပြီး plan ဆွဲသွားချင်တာလည်းပါတာပေါ့လေ..။ သွားမှာက Tour တွေဘာတွေနဲ့လည်းမဟုတ်၊ ဒီအတိုင်း သားအမိ ၂ ယောက်ထဲ သွားမှာဆိုတော့ နီးစပ်ရာ ပါတ်သက်ရာ တွေက အမျိုးမျိုးသော အကြံဥာဏ်တွေပေးကြပါတယ်။
အဲဒီ့မှာ တော်တော်များများ တညီတညွတ်တည်း ပေးကြတဲ့အကြံဥာဏ်က “ ဟိုရောက်ရင် တတ်နိုင်သရွေ့ မြန်မာလိုမပြောနဲ့၊ မြန်မာလိုမ၀တ်နဲ့၊ မြန်မာမှန်း မသိစေနဲ့တဲ့” စိတ်ထဲမှာ ခံပြင်းစိတ်က အရင်ဝင်လာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ ပြန်မေးမိတော့ အန္တရာယ်များလို့ ဆိုတဲ့ အဖြေကအရင်ထွက်လာတယ်။ တကယ်ကို စေတနာနဲ့ လမ်းညွှန်ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် ထော်လော်ကန့်လန့် လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ လူကြီးတွေဖြစ်နေလို့ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မေးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ အဲဒီ့တော့ တွေ့သမျှ၊ သိသမျှ လူတွေတော်တော်များများဆီမှာ စနည်းနာရပါတော့တယ်။ အမေကိုယ်တိုင်ကတော့ သူ့အသိမိတ်ဆွေတွေ၊ အထူးသဖြင့် Travel and Tour လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်က အဲဒီ့လို သတိပေးလိုက်တာမို့ ဘာမှစောဒက တက်စရာမလို ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံပြီးသားဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီ့တော့ Green Rose ရဲ့ မကျေမနပ် လက်မခံချင်ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံကိုမြင်တော့ “နင်ကဘာဖြစ်နေတာလဲ၊ အကုန်လုံးက အတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ အခေါက်ခေါက်အခါခါ သွားနေတဲ့လူတွေ၊ ဟိုတစ်ယောက်ဆို အဲဒီ့မှာ ရုံးခန်းတောင်ဖွင့်ထားတာ၊ မပြောနဲ့ဆိုမပြောနဲ့၊ မ၀တ်နဲ့ဆိုမ၀တ်နဲ့ပေါ့” တဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ Green Rose ကလည်း မြန်မာအ၀တ်အစားချည်းပဲ ၀တ်တဲ့ မြန်မာဆန်သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက Green Rose က ကိစ္စတစ်ခုကို အကျိုးအကြောင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံမသိရပဲ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လက်မခံနိုင်ပဲ လိုက်နာတတ်တဲ့လူမျိုးထဲမှာ မပါပါဘူး။
အဲဒီ့လိုနဲ့ မေးရင်း၊ မြန်းရင်း စုံစမ်းရင်း ထိုင်းကနေ အထည်တွေဝယ်ရောင်းနေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်နဲ့တွေ့မှ အကြောင်းရင်းကို သေချာသိလိုက်ရပါတယ်။ “အဲဒီ့မှာ မြန်မာမှန်းသိရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာက မြန်မာအချင်းချင်းကြားက ပြဿနာပါ။ ထိုင်းလူမျိုးတွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာအများစုရှိတဲ့ နေရာတွေမှာဆိုရင် မြန်မာမှန်းသိသွားတဲ့အခါ အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလုခံရတာပါ။ မြန်မာအချင်းချင် ပြန်လုကြတာပါ” တဲ့။ အဲဒီ့မှာ Green Rose စိတ်ထဲမှာ တော်တော် မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ အစက ထင်ထားတာက တချို့သောထိုင်းလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာဆိုရင် အထင်သေးစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံကြတယ်၊ အန္တရာယ်ပေးချင်ကြတယ် လို့ထင်ထားတာပါ။ ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ရင်ဆိုင်ပြီးသားပါပဲ၊ ခုတော့ ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းဆိုတော့ စဉ်းစားရပါပြီ။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ ကိုယ့်မိသားစုဝင် အချင်းချင်း ပြဿနာတက်ရတာမျိုးကို ရှက်စရာလို့မမြင်ပေမယ့် သူများအိမ် အလည်သွားရင်း ကိုယ့်အချင်းချင်း ပြဿနာဖြစ်ရမှာမျိုးတော့ ရှက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာမှန်းသိအောင် မြန်မာအ၀တ်အစားတွေချည်း ၀တ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်မိမှာပါ။ ခုတော့ အမေနဲ့ဆိုတော့ စဉ်းစားရပါပြီ။ ကိုယ့်ကို အားကိုးပြီး သွားပါတယ်ဆိုမှ တစ်စုံတစ်ခု အန္တရာယ်ကျရောက်လာခဲ့ရင် Green Rose အသုံးမကျရာ ကျပါတယ်။ အမေ့ရဲ့ဘေးကင်း လုံခြုံရေး၊ အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ရေးဟာ Green Rose တာဝန်လုံးလုံး ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲဒီ့တော့ မြန်မာအ၀တ်အစားမ၀တ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကျပါတယ်။ အမေက ထည့်ကိုမယူရဘူးဆိုပြီး တချက်လွှတ်အမိန့်ချပါတယ်။ (ကိုယ်သတ္တိမရှိတာ အမေ့ကိုလွှဲချတာပါ) ဒါပေမယ့် ထည့်မယူပေမယ့် လေဆိပ်အသွားမှာ ၀တ်သွားဖို့တော့ အတိုက်အခံလုပ်ယူပါတယ်။
အဲလိုနဲ့ အမေ့ရဲ့ မျက်စောင်းနဲ့၊ ပွစိပွစိစကားတွေကို မသိချင်ယောက်ဆောင်ပြီး မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ လေဆိပ်ဆင်းပါတယ်။ (:smile: ဒီလိုလေးလည်း ပြုံးထားတယ် မလှမှာစိုးလို့)
အဲလိုနဲ့ သွားလိုက်တာ ဟိုဖက် ထိုင်းလေဆိပ်အ၀င် လေယဉ်ပေါ်က ဆင်းကတည်းက ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှာကို မျှော်လင့်ထားတဲ့ စစ်သားလို မြန်မာဆိုပြီး လာနှိမ်ရင်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေ့ပဲဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကိုအသင့် မောင်းတင်ထားမိပါတယ်။ မျက်နှာကြောကတော့ အတော်အသင့် တင်းနေမှာအမှန်။ လျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနဲ့ Immigration ကို တော်တော်နဲ့မတွေ့ တဲ့အခါ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးမြင်နေပေမယ့် ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ မသင်္ကာဖြစ်လာပြီး တွေ့ရာ enquiry ကိုဝင်မေးရတဲ့အချိန်မှာတော့ တင်းထားတဲ့ မျက်နှာကြောတွေ လျှော့ချပြီး စပြုံးရတော့တာပါပဲ။ မြန်မာဆိုတာ မယဉ်ကျေးသူတွေလို့ မှတ်ကျောက်တင်သွားမှာ မခံနိုင်ဘူးလေ။
လေဆိပ်အထွက်မှာ ဆေးရုံက လာကြိုတာမို့ အခက်အခဲမရှိ တည်းခိုရာနေရာကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်နေ့မနက်ကစ ပြဿနာတက်တာက အမေပေါ့လေ။ လာကြိုတဲ့ မြန်မာစကားပြန်မလေးက မနက် ၈ နာရီအရောက် ဆေးရုံကိုလာဖို့ မှာထားပေမယ့် Green Rose ရဲ့ အမေက ၀ီရိယ ကောင်းစွာနဲ့ ၇ နာရီအရောက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ မနက် (၇) နာရီ ဆေးရုံကိုရောက်သွားတော့ ဆေးရုံမှာ မြန်မာစကားပြန် တစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ ထိုင်းလူမျိုးတွေ အင်္ဂလိပ်စာ တော်တော်အားနည်းတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် လေ့လာကြည့်တော့ သူတို့ဆီမှာ စာမတတ်သူတွေတောင် လူတန်းစေ့ နေနိုင်အောင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးထားတာ၊ မိခင်ဘာသာ စကားနဲ့ပဲ တော်တော်တန်တန် အဆင့်မြင့်တဲ့ နေရာတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေနိုင်တာတွေ တွေ့လာရပါတယ်)
Green Rose ရော အမေရော မြန်မာဝတ်စုံဝတ်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့က Green Rose တို့ကို ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ပဲ ပြောပါတယ်။ Green Rose တို့က နားမလည်တဲ့ အကြောင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ပြောတော့ အံ့သြသွားပြီး ဘာလူမျိုးလဲ၊ ဘယ်ကလာသလဲလို့မေးပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ Green Rose က ပြန်ဖြေလိုက်တာက “Myanmar, I come from Myanmar..” တဲ့။ အဲဒီ့လိုဖြေနေတဲ့အချိန် Green Rose ရဲ့ရင်ထဲမှာ ဘာကို ဂုဏ်ယူနေမိမှန်း မသိ ဂုဏ်ယူမိ၊ ဘာကို ကျေနပ်နေမှန်းမသိ ကျေနပ်နေမိတာ သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ ရုတ်တရက် ဘာကြောင့်လဲလို့ စဉ်းစားမရပေမယ့် ၂ ခါ၊ ၃ ခါ လောက် အဲလိုဖြေ၊ အဲလိုခံစားမိ လာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စမ်းစစ်ရပါတော့တယ်။ ဘာလဲ.. ၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲဒီ့မှာ ထွက်လာတဲ့အဖြေက ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး သိက္ခာကျမယ့်အလုပ် တစ်ခုမှ မလုပ်မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ် ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ် ဆိုတာပါပဲ။
“Myanmar, I come from Myanmar..” ပါ။
နည်းနည်းတော့ ကြောင်စရာ(ကိုရင်ကြောင်ရဲ့ဆရာမဟုတ်) ကြီးပေါ့..
Mars ကလူတွေ.. Martian လို့ခေါ်တာမို့.. Myanmar/s ကို…
တစ်သွေးတစ်သားထဲကွ ..” လို့ …
ဒီလို ဂုဏ်ယူစမ်းဘာဗျာ …
Burmese လို့ ပြောချင်လည်း ရတာပဲ မဟုတ်လား ။ Myanmar, Burmese (or ) Kachin… လေ မရဘူးလား
Myanmartian က တမျိုးကြီးပဲ ဟိုက ဂြိုလ်ပေါ်တတ်တော့ ဂြိုလ်သားကို ပြောချင်တာနေမှာပေါ့
အပေါ်လင့်ခ်ကအယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာ.. Apr 11, 2012 ကရေးခဲ့ဖူးတယ်..
ပသင်္ဂ၀ိသောဓနီ​ကျမ်း၌ အစဉ်အတိုင်း” ဗြဟ္မာ၊ ဗရမ္မာ၊ ဘရမာ၊ ဘမာ၊ ပရမ္မာ၊ မြန်မာ”ဟု ရေးထားခဲ့ပေရာ” မြန်မာနှင့် ဗမာအတူတူသာ”ဟု ယူဆချင်မိပါသည်။
သခင်ဘသောင်းကမူ “တို့ဗမာ”ဟူသော စကားလုံးစတင်ထီထွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟု ဆိုထားခဲ့သည်။
ဗမာကို အင်္ဂလိပ်လို Burman ဟုခေါ်သောမှတ်တမ်းများ အေဒီ၁၀၀၀၀န်းကျင်ကတည်းကရှိနှင့်ပြီး မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ စတင်အခြေချစဉ်ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၆၀၀ကျော် တပင်ရွှေထီးမင်းလက်ထက်က မြန်မာတို့ကို Burman များဟု ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
နောက်ပိုင်း ကျွန်ပြုနိုင်သောအခါတွင် Burmese ဟုတနိုင်ငံလုံးကို နှိမ်ချသုံးစွဲခဲ့ပုံပေါ်လေသည်။ -ese Suffix နှင့်အဆုံးသတ်ခြင်းတွင် လူမျိုးနွယ်တခုကို နှိမ်ချခြင်းသဘောပါလေမည်လားဟု အခြားသောဥရောပ မျိုးနွယ်စုကြီးအမည်၏ (Suffix)များနှင့်နှိုင်းယှဉ်တွေးမိဖူးသည်။ (လက်တင်ဘာသာစကား အဘိဓာန်ကိုရှု)
မည်သို့ဆိုစေ Burman မှ Burma > Burmese ဟုခေါ်သည်ကိုကား ငြင်းဖွယ်မရှိမြင်မိသည်။
မြန်မာဟူသောအမည်မှာမူ ရှေးကျောက်စာများ​၌ပါဖူးပြီး တရုတ်များက (မိယန်င်) ခေါ်ကာ ထိုင်းလူမျိုးများက “ဖမာ”ဟုခေါ်သည်ဟု သိဖူးပါသည်။
သခင်ဘသောင်း၏ “ဗမာပြည်သည် တို့ပြည်၊ ဗမာစာသည် တို့စာ၊ ဗမာစကားသည် တို့စကား၊ ဗမာပြည်ကို ချစ်ပါ။ ဗမာစာကို ချီးမြှင့်ပါ၊ ဗမာ စကားကို လေးစားပါ” ကြွေးကျော်သံသည် ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအတွက် အဓိက သော့ချက်တခုဖြစ်နေနိုင်လေသည်။ အိုင်ယာလန်၏ Sinn Féin မှအခြေပြုမွေးယူလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သခင်ဘသောင်းက၀န်ခံထားခဲ့၏။
ဗမာကို တိုင်းရင်းသားများအားလုံးနှင့်ဆိုင်သယောင်အဆိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဟု ယူဆနိုင်ကောင်း၏။ သို့သော် ထိုသို့ အတိအကျသတ်မှတ်အမည်ပြုခြင်းကပင် အမျိုးသားရေးအင်အားဖြစ်စေခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးအရယူလမ်းပေါ်တက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
မည်သို့ခေါ်ကြသတ်မှတ်ကြသည်ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်အမည်တခါပြောင်းခြင်းသည် တိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာငွေကို များစွာဖြုန်းတီးပစ်ရာရောက်ပြီး နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ သင်ရိုးစာအုပ်စာတန်းများပါ ပြင်ဆင်ရသဖြင့် ဘီလီယန်ချီသော ဒေါ်လာငွေကြေးကုန်ကျမှုဖြစ်စေသည်ကား အသေအချာပင်ဖြစ်တော့သည်။
ကိုယ် မွှေးတဲ့မီး ကိုယ့်ဖာသာ ငြှိမ်းသွားတာမို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ (နို့မို့ ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမှန်းမသိလို့ စိတ်ပိန်နေတာ)
မုန်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုကြားဖူးတာကတော့ ဒီဖက်ကစစ်သွားတိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အပျက်အစီးတွေကို သူတို့လူမျိုးတွေစိတ်ထဲစွဲနေရအောင် မပြုပြင်ပဲထားတဲ့နေရာတွေထားတုန်းပဲလို့သိရတယ်…လုတာယက်တာ ကတော့ အာရှမှာဆို မလေးကနာမည်ကြီးပဲ..
အပျက်အစီးတွေကို မပြုပြင်ပဲ ထားရခြင်းအကြောင်းက အဲဒီ့တစ်ချက်တည်းတင်မကပါဘူး။ အဲဒီ့နေရာတွေက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေဆီကို ဆွဲဆောင်ပြီးရတဲ့ဝင်ငွေကြောင့်လည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ (Green Rose တို့တွေ စဉ်းစားစရာ အတုယူစရာပါ။)
နောက်တစ်ခု Green Rose တွေးမိသလောက် သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ညံ့ခဲ့တာကို အမှတ်ရနေပြီး မညံ့ကြရအောင်လို့ လေ့ကျင့်ပေးထားတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
အဲဒီစကားကို ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ပြီး ပြောလာနိုင်မယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း
Mr. Mar Ga ရေ
တနေ့နေ့မဟုတ်ပါဘူး။ အခုပြောချင်ရင် အခုရပါတယ်။ Green Rose ကတော့ အဲဒီ့စကားကို ပြောတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ပြီးပြောခဲ့တာပါ။ သူတို့တွေ အထင်သေးရမယ့် အပြုအမူ တစ်ခုတစ်လေလေးကိုမှ Green Rose မလုပ်ခဲ့လို့ပါ။ ဒီပို့စ်လေးမှာ Green Rose ပေးချင်တဲ့ massage လေးက အဲဒါလေးပါပဲ။ Green Rose တို့လို သာမန်လူတွေအဖို့ နိုင်ငံဂုဏ်တက်စေမယ့် ကိစ္စမျိုးတွေ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံသိက္ခာကျမယ့် အပြုအမူမျိုးတွေ မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိတယ်ဆိုတာလေးပါ။ Green Rose အရေးအသားမကောင်းလို့ ပေးချင်တဲ့ message လေးကို ဘယ်သူမှ မဖမ်းမိလိုက်ဘူး။ အခု Mr. Mar Ga ရဲ့ comment လေးကို reply ပြန်ရင်း ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်နော်။
ဂရင်းလေး ဘာလုပ်လုပ် အားလုံးမှန်တယ်ကွဲ့ 
ခြစ်တယ်ကွာ ( ခရက်ဒစ်တူ ဆရာကြောင် )
များများခြစ်ပါ။ ဦးပေ များများခြစ်မှ Green Rose ကသူကြီးဆီက ပိုက်ပိုက် များများရမှာလေ.. အဲဒီ့တော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီပို့စ်ထဲမှာ Point 100000 ဖိုး ပြည့်အောင် ခြစ်ပေးပါ။ ဒါမှ လာမယ့် January မှာ သူကြီးဆီက ပိုက်ပိုက် ထုတ်လို့ရမှာ။ :harr:
Green Rose တို့ကလဲ သူတို့ ကို ထမင်းကျွေးနေတဲ့ Customer မို့ သူတို့ကလဲ တရိုတသေ ဆက်ဆံမှာပါ။
ကိုယ့် Customer ဆိုကထဲ က ဘာလူမျိုး ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ အရေးတယူ ရှိသင့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကနေ ဘန်ကောက် ကို ဆေးစစ်/ ဆေးကု သူတွေ အတော်လေး များတယ် ထင်တယ်နော်။
Service နဲ့ Price ကရော ဘယ်လိုနေလဲ သမီးရေ။
ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ customer service ကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ ဒီမှာလည်း အဲလိုဖြစ်ရင်ကောင်းမယ် လို့တွေးမိတယ် အရီးရယ်…။
Service နဲ့ Price ကတော့ fair ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုး …. ငယ်ငယ်တုန်းက
ဘန်ကောက်ကို ပထမအကြိမ် စသွားဖို့ ပြင်တော့
မြန်မာတွေအတည်းများတဲ့ တည်းခိုခန်း (သူတို့ကတော့ဟိုတယ်လို့ခေါ်တာပဲ)ကို သွားမိပါတယ်။
နောက်နေ့တော့ မြန်မာတွေနဲ့ဝေးတဲ့ဟိုတယ်ကို ပြောင်းပြေးရတာပဲ….
Green Rose ပြောချင်တာလည်း အဲဒါပါပဲ ဦးဦးပါလေရာရေ…
Green Rose တို့ကတော့ မပြေးခဲ့ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြားရတဲ့သတင်းတွေ ရင်ထဲမှာ မကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ ကိုယ်ဆိုးချင်သလောက်ဆိုးကြပါ၊ ကိုယ့်မိဘ ဆူပူ ဆုံးမတာကို ခံရယုံအပြင် မိသားစု သိက္ခာမကျပါဘူး။ ခုတော့ သူများအိမ်မှာ သွားပြီး အနေအထိုင်မတတ်ကြတော့………..
Green Rose ကတော့လေ သူများအထင်သေးစရာဖြစ်အောင် မနေခဲ့၊ မပြောခဲ့၊ မပြုမူခဲ့မိတာတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်။ အားလုံးအဲလို တစ်ယောက်ချင်း သတိထားကြမယ်ဆိုရင် Green Rose တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ Image က အရမ်းကောင်းလာမှာပါ။
Green Rose ရေ..
ကျုပ်လည်း နိုင်ငံခြားမှာ အလိမ်ခံရဖူးပါတယ်…
ဒီလောက်မြန်မာအလိမ်ကောင်းရက်နဲ့ ဘောပွဲကျ နိုင်အောင်မကန်နိုင်တာအံ့ပါ့.. :harr:
ဦး kyeemite ရေ
ဘောလုံးပွဲ မနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ .. အင်း.. ဘောလုံးက ခြေထောက်နဲ့ကန်ရတာကိုးလို့.. ပါးစပ်နဲ့သာ ကန်ခိုင်းကြည့်ပါလား.. ဟွန်း.. တခြားတိုင်းပြည်ကလူတွေ ဖလားဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးပါလိမ့် ဖြစ်သွားမယ် …
မှတ်ချက်။ ။ ဦးကြီးမိုက် Hints ပေးပြီးမေးသောကြောင့် ဖြေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာသမျှ ကိစ္စအ၀၀ ဦးကြီးမိုက်မှ